Guri iib | Guri.so
DhulGoob ganacsiGuri iibGuri kiroXafiis All Types
Min Price 0 100$ 300$ 500$ 700$ 900$ 1,100$ 1,300$ 1,500$ 1,700$ 1,900$
Max Price 200$ 400$ 600$ 800$ 1,000$ 1,200$ 1,400$ 1,600$ 1,800$ 2,000$
Guri iib (5)
Guryo iib ah ( Sell houses)
Somalia, Nugaal, Garowe, Waberi–u dhaw Masjidka Alquba
Listing ID: 115 Type: Sell Property type: House Address: Somalia, Nugaal, Garowe, Waberi–u dhaw Masjidka Alquba Price: $ 32, 000 Sale Description: # Houses for sell (Guryo iib ah) # Guryahaan waa laba guri oo kala madaxbanaan, isla markaana kaabiga isku hayaa; midkasta uu ka koobanyahay 2 qol, suuli iyo jiko. Badka cabirkoodana waa 20x30m. Wuxuuna kuyaalaa xaafada waaberi gaar ahaan waxa…
Guri iib ah ( sell house)
Somalia-Garowe- 1 August- Aaga Hay’ada Sahan
VILLO CUSUB OO IIB AH -GAROWE Listing ID: 109 Type: Sell Property type: House Address: Somalia-Garowe- 1 August- Aaga Hay’ada Sahan Price: $ 45,000 Sale Description: # House for sell ( Villo iib ah )# Gurigan waa villo cusub oo iib ah haddana gacanta laga jaray. wuxuuna ka koobanyahay 3 qol, 2 suuli, Fadhi, Jiko , Barando iyoBbaraag. Badka cabirkiisu waa 10x20m. Wuxuuna kuyaalaa…
DABAQA HOOSE Xaafadda Daarusalaam waxaad ka heli kartaa dabaqyo kala duwan . dabaqan wuxuu ka koobanyahay 2 biyaano. Biyaanada hoose wuxuu leeyahay qol jiif ah, fadhi, qado, jiko, 2 musqulood, barando iyo jardiin. Waxaa dheeraad ah 2 qol iyo masqul (service)-ka ah oo loogu talagalay shaqaalaha guriga ka adeegaya. DABAQA KORE Biyaanada kore wuxuu leeyahay…
Mogadishu, Banaadir, Somalia City: Mogadishu
Waa villa kakooban 6qol 3musqul barando barxad barkin noqota Madaboolna gurigu waxaa kudhaw laamiga waxarcade iskulka Dayax SOSna kuuma dheera faahfaahin taa nmrkan kalaxariir
Waa Guri cusub oo dhismihii dambe ah, wuxuu ku yaalaa deegaanka Weydow dhanka Degmada Hodan. waxaa ka dhisan 6 Qol, 3 Musqul, kushiin iyo parking weyn. Cabirka Guriga waa 20x20M2. Qiimaha waa $132,000 iyo heshiis. Wixii faah faahin dheeri ahna, Kala soo xiriir Kirosom Real Estate Solutions Telephone: 0612 922 241 / 0612 922 242
Call us 10:00 – 19:00
Airport street 125, Bosaso, Somalia